वडाध्यक्षको मनपरी ! « Ok Janata Newsportal
वडाध्यक्षको मनपरी !
काठमाडौं । डोटीको आदर्श गाउँपालिका वडा नम्बर ७ को वडा कार्यालय भवनलाई गतवर्ष नै सरकारी भवनमा सार्ने भनी स्थानीय जनताबीच छलफल हुँदा समेत कार्यालय सरेको छैन । करिब २ लाख ५० हजारको लागतमा गतवर्ष पुनर्निमाण गरिएको स्वास्थ्यको भवन अलपत्र पारेर वडाध्यक्ष विष्टले आफ्नै घरबाट कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
आदर्श गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेक रोकायाका अनुसार वडा कार्यालय भवनलाई गतसाल नै सरकारी भवनमा सार्न भनिएको थियो । अध्यक्ष रोकायाले भन्नुभयो, ‘सरकारी भवन बनिसकेको छ, त्यहाँ वडा कार्यालय सार्नु भनि सल्लाह दिएको थिए । सानो तिनो विषयमा राजनीति गर्ने मान्छेले चुक्नु हुँदैन ।’ वडाध्यक्ष विष्टका छोरा गणेश विष्टको घरमा वडा कार्यालय भवन राखिएको छ ।
स्थानीयका अनुसार स्वास्थ्यको भवनमा केही दिनअघि भारतबाट आएका मानिसलाई क्वारेन्टाइन बनाएर राखिएको थियो । २ लाख ५० हजार लागतमा पुनर्निमाण गरिएको भवन अहिले अलपत्र छ । गाउँपालिकाका अनुसार सरकारी भवन बनिसकेकाले आगामी दिनमा वडा कार्यालयको भाडा तिर्न मिल्दैन । वडा कार्यालयलाई स्वास्थ्यको भवनमा सार्नुपर्ने हुन्छ ।
वडा कार्यालयको भवन निर्माणका लागि गतवर्ष ३५ लाख रकम विनियोजन गरिएको थियो । जग्गा नपाइएको भन्दै उक्त रकम फ्रिज भएको थियो । ००००
उम्मेदवारको नामावली आज प्रकाशन हुँदै
डोटीमा माओवादी र नेकपा एसबीच मात्रै तालमेल (लिस्टसहित)
डोटीमा कांग्रेसभित्र वार, गठबन्धन स्वीकार्य नहुने अडान